Ụbọchị: 3 October 2019
Y :ce: ilgbọ okporo ilgbọ okporo Solgbọala Ngwọta okporo ụzọ ”
Onye isi obodo nke Sakarya Ekrem Yüce 1-3 sonyere na International Marmara City Forum nke Ndị otu Mgbakọ nke Marmara haziri. Na nnọkọ a kpọrọ aha: Ndị isi Okwu Na-ekwu Okwu: N’iche N’iru, N’ịga n’akọ Başkan, Onye isi ala Ekrem Yüce kwuru, mee Creatmepụta obodo ga-ebi ndụ, [More ...]
SAMULAŞ 'Egwuregwu' Oriri!
Samsun Metropolitan Mun SAMULAS 'Social Services' nke ndị ọrụ hibere na-ahụ maka asọmpi egwuregwu bọọlụ, nwere egwuregwu na-akpali akpali. [More ...]
Marmaray na Bridges, guzogidere n'oké osimiri Alamara nke Marmara
Turhan rụtụrụ aka na 15 July Martyrs na Fatih Sultan Mehmet àkwà mmiri wusiri ike ma gbakwunye: [More ...]
Karabük Chamber nke Azụmaahịa na Onye isi oche Mehmet Mescier bipụtara akwụkwọ akụkọ banyere nguzobe nke illọ Ọrụ Techgbọ njem ụgbọ njem na Karabük. Onye isi ala Mescier kwupụtara nke a na nkwupụta ya; Sanayi Anyị ji nganga buru ụlọ ọrụ anyị [More ...]
Onye isi ụlọ ọrụ ahụ gara na CHP na-akatọ ọrụ ahụ ma kọwaa ọnọdụ kachasị ọhụrụ. Özgümmüş, onye ọrụ nke Bursa Teleferik, onye rụrụ ọrụ na ụgbọ ala elektrọnik ikuku nke Kırkpınarlılar jụrụ n'ụlọ ọrụ ahụ, kwuru, [More ...]
Kartepe Teleferik Project ugbu a Ọnọdụ
Emere Nzukọ Mgbakọ Ọgbakọ Ọkt Oktoba n’okpuru onye isi obodo nke Mayor Av.M.Mustafa Kocaman. Emebere Mgbakọ Mgbakọ nke Kartepe nke October n’okpuru okpuru nke onye isi obodo nke Kartepe, Mustafa Kocaman. A tụlere ihe 6 ihe a tụlere ma dozie ya na nzukọ Mgbakọ. [More ...]
Emepeela actorylọ Ọrụ Volkswagen Manisa
TAYSAD onyeisi oche Alper nko, kwuru, sị Volkswagen nwere ike ịmepụta a domino utịp investments na Turkey na ụlọ ọrụ ndị ọzọ ga-reinvested. Volkswagen, ndị kasị ibu n'ụwa akpakanamde emeputa, họọrọ Turkey maka ulo oru mbo ke ọhụrụ factory a na-ekwu banyere ọtụtụ ọnwa. German [More ...]
Lineun Railway Samsun Sivas Gịnị kpatara anaghị emeghe?
Ọ na-eche ihe kpatara na emeghereghị ụzọ Samsun-Sivas. Ihe kpatara na emepeghị ụfọdụ nrịgo gafere, enweghị ike idozi, ụfọdụ n’ime ha jikọtara na mbuze. Ka ọ dị ugbu a, oru ngo ahụ na-echekwa ihe kpatara na agbasaghị usoro ịgafe larịị 2018 na njedebe nke ọrụ [More ...]
TMMOB, Ala Miti Ala Ọma Jijiji Mwute Ala Obodo Emechiri na Istanbul
Ihe egwu nwere ike ibilite n'okporo ụzọ ụzọ ụgbọ oloko kwụsịrị mgbe ala ọma jijiji nke nha nke 5.8 nke wụsara ndị Istanbul n'okporo ụzọ bịarutere atụmatụ a n'ihu ọha. Na nkwupụta nke TMMOB Chamber of Mining Engineers kwuru, enwere ike nwee ihe egwu metụtara ala dị n'okpuru ala [More ...]
Onye isi obodo Bursa nke Obodo Bursa Alinur Aktas, kwuru na ha na-akwado iji hụ na azụmahịa niile nwere ike ịme digitally na njem, "Mgbe obere oge gachara, ụmụ amaala nke Bursa nwere ike ịme azụmahịa njem ọ bụla na ntanetị na ekwentị." Mayor Aktas, Ndị isi obodo Marmara [More ...]
Taa na akụkọ ihe mere eme: 3 October 1932 İzmir Dock Company
Taa na History 3 October 1932 Izmir Quay Company ama mba. Akụkọ Railway yiri nke ahụ na akụkọ ndị ọzọ nwere ike ịmasị gị taa: 3 October 1932 Izmir Dock Company bụ mba. 03 / 10 / 2012 3 October 1932 Izmir Dock Company bụ mba. [More ...]
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa October 2019 (421) September 2019 (555) August 2019 (508) July 2019 (633) June 2019 (504) Mee 2019 (526) April 2019 (418) March 2019 (521) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (581) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (535) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (830) September 2012 (886) August 2012 (974) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)